वडा सदस्यले बाँडे सहयाेग – Pahilo Page
१५ चैत्र २०७६, शनिबार १५:३० 459 पटक हेरिएको
तुलसीपुर उपमहागरपालिका वडा नं. ६ का सदस्य दुजमान भण्डारी बर्षातले दुई घर परिवारलाई खाद्यान्न सहयाेग गरेका छन् । काेराेना भाइरस काेभिड १९ का कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका दुई घर अति विपन्नलाई उनले खाद्यान्न सहयाेग गरेका हुन् ।
बजारमा रिक्सा चलाएर दैनिकी चलाइरहेका तुलसीपुर ६ बरुवागाउँका केशर बहादुर थापालाई भण्डारीले घरमा पुगेर चामल, दाल, नुन र तेल दिएका हुन् । `रिक्सा चलाइ जम्मा भएकाे पैसाले दैनिक रुपमा रासन किनेर ल्याउँथे, बजार बन्द भएपछि त्याे पनि हरायाे´ थापाले भने । यस्ताे बन्दकाे समयमा पनि वडा सदस्य रासन बाेकेर अाफ्नाे घरमा अाएकाे भन्दै ६५ बर्षिय थापाले खुसी ब्यक्त गरे । स्थानीय हरिकला मियाँले खवर गरेपछि वडा सदसय भण्डारी बुधबार दिउसाे खाद्यान्न लिएर थापाकाे घर पुगेका थिए ।
त्यस्तै सल्यान स्थाइ घर भइ बनकट्टामा काेठा भाडामा बस्दै अाएकी मनमाया घर्तीकाे परिवारलाई पनि भण्डारीले खाद्यान्न दिएका छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खर्चकाे जाेहाे गर्ने मनमायाकाे परिवारमा खाद्यान्नकाे समस्या भएपछि स्थानीयले वडा सदस्य भण्डारीलाई खवर गरेका थिए ।
यसअघि भण्डारीले अाफ्नाे वडामा कसैलाई खाद्यान्न अभाव लगायत कुनै पनि समस्या परे अाफु समाधान गर्न तयार रहेकाे फेसबुक मार्फत घाेषणा गरेका थिए । भण्डारीले अाज ब्यक्तिगत खर्चमा दुई परिवारलाई २/३ दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न दिएका छन् । उनकाे याे अभियानलाई वडा नं. ६ का अध्यक्ष नवराज लामिछानेले पनि साथ दिएका छन् । लामिछानेले अाफ्नाे वडा भित्र काेही समस्यामा परेकाे जानकारी अाए सहयाेग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।